ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်၏ထွနောက်သို့ Get ငါးနည်းလမ်းများ.
ဒါကြောင့်သင်ဟာတက် messed? ခွင့်ပြုဘို့သူ့ကို ယူ. ,? သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေး၏လိုအပ်ချက်ကိုအလုံအလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမပြခဲ့ပါ? သင်၏အသက်တာ၏မေတ္တာကို Lost and သင်သူ့ကိုနောက်ကျောချင်တယ်? ဒါဟာနောက်ကျောကသူ့ယုံကြည်မှုရရန်ခက်ခဲလမ်းဖြစ်သွားပေမယ့်အဲဒါကိုကောင်းကောင်းထိုက်သည်. နောက်ဆုံးတော့, it isn’t every day that one meets the love of their life and they actually reciprocate their feelings. မြန်နှုန်း-ချိန်းတွေ့မယ့်လူမျိုး၏စာ​​ရင်းရှည်, စသည်တို့ကို … သင်သည်အဘယ်သို့ဤလူနှင့်အတူတွေ့ရှိရှားပါးသောကြောင်းပြသဖို့လုံလောက်ပါတယ်. But then you know all that already and are feeling downright terrible right now because you can’t hold them in your arms or talk to them. သို့သော်အားလုံးဆုံးရှုံးမဟုတ်ပါဘူး. အနည်းဆုံးနောက်ကျောကသူတို့ကိုရဖို့သင့်ရဲ့အခက်ခဲဆုံးကြိုးစားနိုင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သောမေတ္တာရှိ၏လျှင်နေဆဲလည်းသူတို့ရဲ့ဘက်မှာရှိလိမ့်မည် ဟူ. ဖြစ်သည်. သင်ပြုလိုသမျှကိုသူတို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေ, သူတို့သင်ဖို့ကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာအတိအကျဘာတွေသူတို့ကိုပြသင့်ရဲ့အခက်ခဲဆုံးကြိုးစားဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လိုထွက်ချွေးဖြစ်ပါသည်. ဒီနေရာတွင်ယောက်ျားတွေနဲ့ငါ့ရဲ့မိန်းကလေးလို့လုပ်နိုင်သောင့်နည်းလမ်းအချို့ကို!
1. သူတို့ကိုသင်သင်လုပ်ခဲ့တဲ့ The Way ပြုမူဘာကြောင့်ရှင်းပြပါ
သူကအဲဒါမျိုးကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးသူတို့ကိုခွင့်ပြုသို့မဟုတ်ကုသဘို့သင့်ကိုခေါ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ရောထွေးနေသည်. ဒီသေချာပေါက်သင် ပြု. အဘယ်ကြောင့် ပတ်သက်. အချို့အသေးစိတ်စီစဉ်ဇာတ်လမ်းတက်အောင်ဖို့လိုအပ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး. It means to be honest. ၎င်းသည်သင့်အားသင်ပျိုဖြစ်နိုင်, you didn’t realize what you had until it was gone or any number of reasons. အဘယ်သူမျှမစုံလင်သည်နှင့်သူတို့အမှန်တကယ်သင်ချစ်ကြလျှင်သူတို့လွန်းသူတို့သည်သင့်အကြောင်းမုန်းခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဘို့သင့်ကိုငါချစ်လိမ့်မည်. သို့သော်ဆက်သွယ်ရေးမကြာခဏဆက်ဆံရေးကိုတွင်အဓိကအတားအဆီးဖြစ်. သင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပြု. အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်. သင်သည်ထိုသူတို့ကကြွေးတင်ကြပါနဲ့သူတပါးတို့သည်သင်တို့၏ရိုးသားမှုနှင့်သင်ရဲရင့်ခြင်းရှိကြ၏ဟူသောအချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်နှင့်သင်မှားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံဖို့လုံလောက်တဲ့ရင့်ကျက်ပါလိမ့်မယ်.
2. သူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ရန်ခုနှစ်တွင် Stay
သိသိသာသာ, this isadifficult one because they might not want to stay in contact with you. တဖန်သင်တို့ကရိုသေလေးစားရန်ရှိသည်. သင်တို့မူကားကြည့်ရှုရိုးရိုးဆိုရင်သူတို့ကိုဟယ်လိုပြောနှင့်စကားအနည်းငယ်. Show that you haven’t forgotten them. သင်ဂရုစိုက်သောသူတို့အားပြရန်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းချင်သည်သင်တို့မူကား, ဘောလုံးယခုမှာသူတို့တရားရုံးကတွင်ရှိကြောင်းကိုလေးစားလိုက်နာကြောင်း.
ဒါဟာအစားရိုးရှင်းပေမယ့်သူတစ်ဦးလုပ်ဖို့ကကမ္ဘာပေါ်မှာမကြာခဏအခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်. On the other side, there are people who say it far too often. သင်သည်ဤအရပ်၌အချိန်ခွင်ကိုလုပ်ကြံရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဒါဟာလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနဲ့စိတ်ရင်းမှန်ပြီးဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်. ကိုယ်တော်သင်အမှန်တကယ်သင်သည်ထိုသူတို့အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုများအတွက်ဝမ်းနည်းနေသောသူတို့ကိုပြသနိုင်ဖို့လိုတယ်. သူတို့ကိုထိခိုက်များအတွက်. သင်နောင်တရတော်မူသောသူတို့ကိုသက်သေပြဖို့ရန်နှင့်သူတို့ဒီအချိန်ပြန်ယူလျှင်အမှုအရာဖြစ်ရလိမ့်မည်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းလိုအပ်ပါတယ်. ကျွန်တော့်အချည်းနှီးသောစကားများမဖြစ်နိုင်. သူတို့ကချက်ခြင်းသင်အားဖြင့်မြင်ရပါလိမ့်မည်.
4. သင် Changed ထားသောသူတို့သည်ပြရန်
သိသာသောအားမျှမသဘောမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်မဆိုလိုပေ. It was who you are asaperson that made him fall in love with you in the first place after all. သူကသင်ဟာပထမဦးဆုံးဌာန၌ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်ကိုနှင်သောထိုအပျက်သဘောရှုထောင့်ပြောင်းလဲကြပြီသင်သည်သူတို့အားသက်သေပြတာကိုဆိုလိုတယ်. အခုသင်နှင့်သင်ကကနေသိရှိကြပြီဟုသင်ဘယ်နေရာမှာမှားသွားတယ်သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သောသူတို့အားပြသရန်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
သင်လုပ်ဆောင်နိုင်အရှိဆုံးရင်ခုန်စရာအမှုအရာများထဲမှတစ်ခုမှာသင်ချစ်လူအဘို့စစ်တိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်. ကြိုက်မှဆန့်ကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖန်စီသကဲ့သို့သင်တို့ကိုသင့်နောက်အားလုံးကိုချစ်သူတစ်ဦးဦးကိုသာတိုက်ခြင်း. သင်တို့အနားမှာသူတို့အဘို့အတိုက်ခိုက်နေကြပြီးသင်သူတို့ကိုမချစ်ဘယ်လောက်ယခုသင်တို့ထံသို့အရေးပါပါတယ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုသက်သေနေကြပါတယ်သောသူတို့ကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်. သူတို့နှင့်အတူရိုးသားပါ. သင်၏အသက်တာ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းပျောက်ဆုံးနေနှင့်သင် immeasurably ခံစားနေရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရတယ်. လိုင်းပေါ်တွင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထားရန်ပြင်ဆင်ထားခြင်းရှိကြလော့နှင့်သင်၏မာနထောင်လွှားလမ်းခရီး၌ရကုန်အံ့မ. No one wants to be left lonely with their pride intact.
7 တစ်နေ့စွဲသည်လုံးဝ Unique အကြံဉာဏ်များ
5 အမှုအရာမိန်းကလေးများဟာပြိုကွဲပြီးနောက် Do